ပုပ်ဖရန်စစ်နှင့် ဗာတီကန်ထဲက တိုက်ပွဲ
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်သည် မပလွှား၊ မဝင့်ဝါတတ်သော ရိုးဂုဏ်နှင့် နှိမ့်ချတတ်ခြင်းတို့ဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရေပန်းစား လူကြိုက်အများဆုံးသူ ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် ဝတ်ကျောင်းတော်အတွင်း၌မူ သူ၏ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများသည် ရှေးရိုးစွဲများအတွက် အမုန်းပိုစရာနှင့် ဆန့်ကျင်စရာ မီးစသဖွယ်ဖြစ်နေသည်ဟူ၏။
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖြစ်လာသော ကာဒီနယ်ဂျော့မာရီယို ဘိုဂေ့ါလီယိုသည် စတက်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ပင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး၏ ကက်သလစ် ဘာသာဝင်များ၏ နှလုံးသားကို တုန်လှုပ် အောင် ဖမ်းဆုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအသစ်က လူထုအားကောင်းချီးပေးရမည့်အစား သူ့ကိုအရင် ဆုတောင်းပေးကြရန် ဦးခေါင်းကိုငုံ့ကာ မေတ္တာခံယူခြင်းကြောင့် လူထုမှာမျက်ရည်လည်သွားသည်အထိ ကြည်နူးနှစ် သက်ခဲ့ကြသည်။
၂၆၆ ပါးမြောက် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက် ခံရသည့်ညတွင် သတ်မှတ်ထားသော ဇိမ်ခံကားမစီးဘဲ ဘက်စ်ကားစီးကာ ကာဒီနယ်အဖြစ် မိမိတည်းခိုသည့် ဟိုတယ်သို့သွားပြီး ကိုယ်တိုင် အခန်းခပေးသော ပထမဆုံး ရဟန်းမင်းကြီးဖြစ်သည်။
ပုပ်ဖရန်စစ်သည် Society of Jesus ဂျေးဇွပ်အသင်းတော်မှ ပထမဆုံး ပုပ်ရဟန်းမင်းဖြစ်လာသော ဂျေးဇွပ်တစ်ပါးလည်းဖြစ်၏။ တစ်ချိန်က ဂျေးဇွပ်ဂိုဏ်းနှင့် ရဟန်းမင်းကြီး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ Holy See တို့အကြား အတိတ်သမိုင်းတွင် တင်းမာမှုများ ရှိခဲ့ဖူးသော်လည်း ဂျေးဇွပ် ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးက ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအထိ ဖြစ်လာသည်မှာ မည်သူမျှ မမျှော်လင့်ခဲ့ကြသော အပြောင်းအလဲဟု ဆိုရပေမည်။
ပုပ်ဖရန်စစ်သည် အမေရိကတိုက်မှ ပထမဆုံးရဟန်းမင်းကြီးဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၁၃ဝဝ ကြာမှ ပေါ်ထွက်လာသော ဥရောပတိုက် ပြင်ပမှ ရွေးချယ်ခံရသော ရဟန်းမင်းကြီးလည်း ဖြစ်သည်။
ဘာသာခြားများ၊ အိမ်ခြေရာမဲ့များနှင့် မသန်စွမ်းသူများ၏ ခြေကိုဆေးပေးခြင်း၊ ကလေးသူငယ်များနှင့် တရင်းတနီးပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်ခြင်းတို့သည် ပုပ်ဖရန်စစ်ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက ပိုမိုသတိထားမိစေ သော အချက်များစွာအနက် မြတ်နိုးစရာများအဖြစ် တွေ့မြင်ရပေလိမ့်မည်။ ထိုမျှမက ၁၁၈၁ခုနှစ်တွင် အီတလီနိုင်ငံ အက်စီစီရှိ ဒီဘာနာဒွန်း၌ မွေးဖွားခဲ့သော စိန့်ဖရန်စစ်၏ အမည်နာမကိုလက်ခံရယူသည့် ပထမဆုံး ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလည်း ဖြစ်လာသည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များစွာတွင် ဗာတီကန်ငွေတိုက်အတွင်းမှ ရံပုံငွေသန်းပေါင်းများစွာကို အလွဲသုံးစား ပြုသည့် ငွေတိုက်အရာရှိ အများစုကို အလုပ်ထုတ်ပစ်ခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ထိုမျှမက ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအား အကူအညီပေးရန်အတွက် အလယ်ခေတ်ကတည်းက စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ကျူရီယာအဖွဲ့၏ အကျင့် ပျက်ချစားမှုများကိုလည်း ကိုင်တွယ်ခဲ့ ရသည်။ ကျူလီယာအဖွဲ့တွင် ဘုန်းတော်ကြီး ၃ဝဝဝ ခန့်ရှိပြီး အဖွဲ့အ တွင်းမှ အရာရှိများ အချင်းချင်း ရိုင်း ပင်းစည်းလုံးကာ ပုပ်ရဟန်း မင်းကြီး၏ အရေးကိစ္စများထက် သူတို့၏ ကိုယ်ကျိုးကိုသာ ပို၍ဦးစားပေးနေကြ သူများအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ မ ကောင်း သတင်း ထွက်ခဲ့သည်။
ထိုကျူရီယာ အဖွဲ့ကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဘီနီဒစ်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် ရည်ရွယ်သော်လည်း မအောင် မြင်ခဲ့ပေ။ ပုပ်ဖရန်စစ် လက်ထက်တွင်မူ ကျုရီယာအဖွဲ့၏ ထိပ်တန်းအရာရှိများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ လစာငွေများဖြတ်တောက်ခြင်း ပြုခဲ့သည်။ 'စီနိုင်း'ဟု ချစ်စနိုးအမည်ပေးထားသည့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ သီလနှင့် ပြည့်စုံသော ကာနီနယ် ကိုးပါး ပါဝင်သည့် အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းကာ ကျူရီယာများကို ကြပ်မတ် ထိန်းသိမ်းစေခဲ့သည်။
လိင်တူနှစ်သက်သူများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ''ကျွန်တော်က ဘယ်သူမို့လို့ အကဲဖြတ်ဝေဖန်ရမှာလဲ''ဟူသော စကားကလည်း ရှေးရိုးစွဲများအတွက် ငြိုငြင်ဖွယ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုစကားမှာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်သစ်ကူးအတွက် ပုပ် ဖရန်စစ်၏ အကြုံပြုချက်များအနက် ''အခြားသူများကို ကောက်ချက်ချ မဝေဖန်ပါနဲ့''ဟူသောအချက်တွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချက် တွင် ပုပ်ဖရန်စစ်က ''တကယ်လို့တစ်စုံတစ်ဦးက ဂေး(လိင်တူနှစ်သက်သူ) ဖြစ်နေပေမယ့် ဘုရားသင်ခင်ရဲ့ အလိုတော်ကို လိုက်လံစူးစမ်းပြီး (အလိုတော်အတိုင်း) ကျင့်ကြံနေထိုင် မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်က ဘယ်သူမို့လို့ ကောက်ချက်ချဝေဖန်ရမှာလဲ။ အမုန်းတရား၊ ဣဿာမစ္ဆိရနဲ့ မာနတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘဝတွေကို ညစ်ထေးစေတယ်ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့''ဟု တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ထိုအချက်ကိုမူတည်ကာ ပုပ်ဖရန်စစ်ကို မလိုလားသူများက လိင်တူအားပေးသည်ဟု စွပ်စွဲကာ ထိုး နှက်လာတော့သည်။ သို့သော် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလပိုင်းက သြစတြေးလျနိုင်ငံ မဲလ်ဘုန်းမြို့မှ ကက်သ လစ်ဘုန်းတော်ကြီးရေးနော့ (Raynold) အား အမျိုးသမီးများအား ရဟန်းသိက္ခာပေးခြင်းနှင့် လိင်တူလက်ထပ် ပေးခြင်းတို့ကြောင့် ပုပ်ဖရန်စစ် ကိုယ်တိုင် ဖာသာရေးနော့ကို အသင်းတော်မှ ကြဉ်ပယ်ခဲ့ဖူးသည်။
ထိုအကြောင်းကို တိုင်းမ်စ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်ကိုထောက်လျှင် လိင်တူအားပေးဟု စွပ်စွဲ၍ မရဟု ဆိုရမည်ထင်၏။ တစ်ချိန်တည်းတွင် လိင်တူ ဆက်ဆံသူများကို အပြစ်မပေးနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလည်း ဖြစ်လေသည်။
ပုပ်ဖရန်စစ်အပေါ် အမုန်းပို သူများထဲတွင် သူ၏အကြံပေးအချို့ပင် ပါဝင်နေသည်။ ဝတ်ကျောင်းတော်က ကွာရှင်းပြတ်စဲကြသူများအပေါ် အာပတ်မဖြေပေးရန် ရာစုနှင့်ချီကာ ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ လူသားချင်းစာ နာမှုများအပေါ် အစဉ်အလေးအ နက်ထားသော ပုပ်ဖရန်စစ်ကမူ ထို အချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ ပြင်ဆင်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ရာစုနှင့်ချီကာ ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးတွင် ကောင်းချီးပေးခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ခံထားရသည့် သူများကို အခြားတစ်နေရာတွင် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ကောင်းချီးပေးခြင်း ခံယူရနိုင်ခွင့် ရှိ သင့်သည်ဟု ပုပ်ဖရန်စစ်က ဆိုခဲ့ဖူးသည်။
ပုပ်ဖရန်စစ်အပေါ် မလိုလားသည့် ရှေးရိုးစွဲများက ယင်းအမြင်များကို စွန့်လွှတ်ရန် တိုက်တွန်းကြိုးပမ်းကာ မသိမသာ တစ်မျိုး၊ သိသိသာသာ တစ်ဖုံဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ ပုပ်ဖရန်စစ်က သူတို့၏ တိုက်ခိုက်မှုများအပေါ် ခပ်မဆိတ်ပင် တုံ့ပြန်သည့်အခါ ဗာတီကန်အတွင်း၌ ပုပ် ဖရန်စစ်ကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်ပွဲများ အတိအလင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့တော့ သည်။
ယခုနှစ် စက်တင်ဘာကလည်း ပုပ်ဖရန်စစ်ပေါ် ဘဝင်မကျဖြစ်နေသည့် ကက်သလစ် ဘာသာဝင် ၆၂ ဦးက ပုပ်၏ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ဆန်သော ဒေသနာ ခုနစ်ချက်ဟု အမည်တပ် ဆွဲထုတ်ပြီး အိတ်ဖွင့် ပေးစာပေးကာ စွပ်စွဲခဲ့သေးသည်။ ထို ၆၂ ဦးထဲတွင် ဗာတီကန်ငွေတိုက်ကို ဦးဆောင်ခဲ့ဖူး သည့် ဘိရှော့တစ်ပါးလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ စွပ်စွဲမှုများတွင် ပုပ်ဖရန်စစ် ၏ ဝတ်ကျောင်းတော်အတွင်းနှင့် ယုံကြည်သက်ဝင်မှု နယ်ပယ်များအပေါ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆန်သော ပုပ်၏အမြင်နှင့်သဘောထားများကို အဓိကဇန်းတင်ကာ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် အဓမ္မဆန်သည့် ဟောပြောချက်၊ ရေးသားချက်များကို ဝိနိစ္စယတင်ကာ စစ် ဆေးအတည်ပြုပေးနိုင်ရန်အတွက် ရေးသားတင်သွင်းသည့် 'စောဒနာ' တင်သည့် သဘောမျိုးနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူ၏။ ထို့အတွက် ဆန့်ကျင်သူများအလိုအရ ပုပ်ဖရန်စစ်၏ အမြင်နှင့်သဘောထားသည် မှားယွင်းခဲ့လျှင် ပုပ်ရဟန်းမင်း တစ်ပါးမဖြစ်ထိုက်ဟုဆိုသည်။ အကယ်၍သာ ပုပ်ဖရန်စစ်သာ မှန်ကန်ခဲ့လျှင် ရှေ့က ဗာတီကန်ကို ဦးဆောင်ခဲ့ကြသော ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးများက မှားယွင်းနေသည်မှာ အသေအချာဟု ဆိုကြ သည်။
ပုပ်ကို ဆန့်ကျင်သူတို့ဘက်မှ မေးသောအချက်များသည် ကက်သလစ်ဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးအတွက် အန္တရာယ်များသော ခြေလှမ်းကို စလိုက်သလိုပင်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့် ပုပ်ဖရန်စစ်သည် သဘော တရားရေးရာများကို တော်လှန်လိုသူမဟုတ်ပေ။ ရှေးနှစ်များစွာကတည်းက ဝတ်ကျောင်းတော်တွင် ကြီးစိုး မင်းမူနေသည့် ဗျူရိုကရေစီစနစ်၏ စရိုက်ဆိုးများကိုသာ လျော့ပါးစေလိုခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
လက်တွေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် ချစ်ကြိုက်၊ ပေါင်းဖက်၊ လမ်းခွဲကြသော အဖြစ်အပျက်များစွာ ရှိသလို လက်မထပ်ဘဲ အတူနေကာ သားသမီးပွားစည်းကြသော ဖြစ်ရပ်များများစွာ ရှိနေသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက ကက်သလစ် ဘာသာဝင်တို့ထဲတွင် ထိုသူများက မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် များပြားနေပြီး သူတို့သည် ဗာတီကန်၊ ပုပ်နှင့် ဝတ်ကျောင်း တော်၏ နောက်လိုက်ကောင်းများ အဖြစ်လည်း ရှိနေပြန်သည်။ ထို့ အတွက် လင်ကွာ မယားကွဲ၊ ပြန် ပေါင်းထုပ်ကြသူများ၊ လက်မထပ်ဘဲ အတူနေသူများကို တကယ်တမ်း လျစ်လျူရှုရမည်ဆိုလျှင် အနာဂတ် ကက်သလစ်မျိုးဆက်အတွက် လက် တွေ့မဆန်သော လုပ်ရပ်များသဖွယ် ဖြစ်နေလိမ့်မည်။
ဝတ်ကျောင်းတော်နှင့် ပတ်သက်လျှင် ထိုသို့သော အပြောင်းအလဲများသည် ယခင်ကလည်း ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ယခင်ဗာတီကန်သည် ကက်သလစ်များနှင့်သာ ရပ်တည်ပြောဆိုခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဘာသာခြားများနှင့်ပါ နွေးထွေးသော ဆက်ဆံမှုများ ပြုလုပ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ထိုစဉ်ကလည်း အပြောင်းအလဲကို လွယ်လွယ်ကူကူ ရခဲ့သည်တော့ မဟုတ်ပေ။ ယခု ပုပ်ဖရန်စစ် လက်ထက်တွင် ဖြစ်လာသော အ လှည့်အပြောင်းများသည် ၁၉၆ဝ ပြည့်လွန်နှစ်များ နောက်ပိုင်း ဗာတီကန်အတွင်း ကြီးမားသည့် အကြပ် အတည်းသဖွယ် တင်စားကြသည်။
ထို့အတွက်လည်း အပြောင်းအလဲများလုပ်လိုသည့် ပုပ်ဖရန်စစ်အပေါ် အမေရိကန်စာနယ်ဇင်းသမား Ross Douthat က Will Pope Francis Break the Church? ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အတ္တလန္တိတ် မဂ္ဂဇင်းတွင် မေးခွန်းထုတ်ရေးသား ခဲ့သည်။
အင်္ဂလိပ် အစဉ်အလာသမား Damian Thompson ကလည်း ပုပ်ဖရန်စစ်သည် ဗာတီကန်တွင် ယခု စစ်ပွဲဆင်နေသည်။ အကယ်၍သူနိုင်လျှင် ဗာတီကန်သည် အစိတ် စိတ်အမြွှာမြွှာ ပြိုကျလိမ့်မည်ဟု ရေးသားခဲ့သည်။ ကာဇက်စတန်မှ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းချုပ် တစ်ပါးက ကွာရှင်းပြတ်စဲမှုများနှင့် လိင်တူနှစ်သက်သူများအရေးတွင် ပုပ်၏ အမြင်သည် စေတန်၏မှိုင်းလုံးများ ဝတ်ကျောင်းတော်အတွင်း ဝင်ခွင့် ပြုလိုက်သလို ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ဆိုခဲ့ဖူးသည်။
တစ်ဖက်တွင်လည်း ဗာတီကန်တွင် ရဟန်းမလုံလောက်မှုကလည်း ရှိနေပြန်သည်။ ၂ဝ၁၇ခုနှစ် မတ်လက ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ဂျာမန်သတင်းစာ Die Zeit သို့ ပြောကြားရာတွင် အပယ်ခံအသိုင်း အသက်ကြီးသော အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသားများအား ရဟန်း အဖြစ် ချီးမြှောက်ရေးကို စဉ်းစားလိုသော်လည်း ရဟန်းမလုံလောက်မှုကို ကိုင်တွယ်ရန် နည်းလမ်းရှာခြင်း မဟုတ်ဟု ဆိုခဲ့ဖူးသည်။
ရိုမန်ကက်သလစ်ဓလေ့အရ တစ်ကိုယ်တော်သမားများကိုသာရဟန်းအဖြစ် ချီးမြှောက်သည့် ဓလေ့ကို အဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆိုမှုများ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ တော်လှန်ပြောင်းလဲမှု တစ်ရပ်သဖွယ် ဖြစ်နိုင်သလို ကန့် ကွက်မှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အုပ်စုက အိမ်ထောင် အကျင့်စရိုက် ကောင်းမွန်သော အမျိုးသားများကို ချီး မြှောက်ရေးအပေါ် လိုလားနှစ်သက်ကြသည်။ အမေရိကန် ဘုရားကျောင်းများမှ တိုးတက်သော အုပ်စု နှင့် ရှေးရိုးစွဲအုပ်စု နှစ်ရပ်စလုံးက ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ ဆန္ဒသည် ရဟန်းမလုံလောက်မှု ပြဿနာကို လက်တွေ့ကျသော ဖြေရှင်းနည်း အဖြစ် ရှုမြင်ကြသည်။
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်မှ အစီရင်ခံစာတစ်ရပ် တွင် ၁၉၈ဝ မှ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ကက်သလစ် ဦးရေသည် ၄၄၅ သန်း သို့မဟုတ် ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းမျှ တိုးတက်လာသော်လည်း ရဟန်း အရေအတွက်မှာ ၂ဝ၅၄၇ ဦး အထိ (၁၇ရာခိုင်နှုန်းအထိ) ကျဆင်းသွား သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ကက်သလစ်ဘာသာဝင် များစွာရှိသော ဘရာ ဇီးနိုင်ငံကလည်း ထိုအစီအစဉ်ကို ထောက်ခံခဲ့သည်။
ဗာတီကန်အတွင်း၌ အဆင့်အတန်းအလိုက် ဘုန်းတော်ကြီးများ နောက်တွင်ထိုင်ခွင့်ရသော Deacons ရဟန်းများကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း ဆောက်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ လက်ထပ်ခွင့်ရှိသော Deacons ရဟန်းများသည် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ၊ အသုဘနှင့် လက်ထပ်မင်္ဂလာတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော်လည်း ဘုရင်ဂျီ ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲ၊ ဘိသိက် မြှောက်ခြင်းနှင့် အာပတ်ဖြေပေးခြင်း ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပေ။
အမေရိကန် ကက်သလစ် ကျောင်းများတွင် Deacons ရဟန်းများကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်းကြောင့် ရဟန်းအရေအတွက် ပိုမိုများပြားလာသော်လည်း တစ်ကိုယ်ရေ ရဟန်းများအပေါ် ရိုက်ခတ်မှု ရှိမည်ကိုစိုးရိမ့် သည့်အကြောင်း ရှေရိုးစွဲအုပ်စုမှ ဥက္ကဌဘီလ်ဒိုနိုဟူးကဆိုသည်။ သိုသော်လည်း တိုးတက်သော အုပ်စုဝင် အများစုကမူ ပုပ်ဖရန်စစ်၏ ပြောင်းလဲသော အတွေးအခေါ်များ ကို အပြည့်ဝ ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
The Joy of Love ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပုပ်ဖရန်စစ် ရေးသားထားသည့်စာတွင် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု၊ အရင်းရှင်ဝါဒနှင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ အရေးကိုပါ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ လက်ရှိပြောဆိုနေကြသည့် ကွာရှင်း ပြတ်စဲခြင်းအတွက် အနည်းအကျဉ်းမှ ထည့်သွင်းဖော်ပြပြီး အောက်ခြေမှတ်စုတွင် ကွာရှင်းပြတ်စဲကြသူများနှင့် ပြန်ပေါင်းထုပ် ကြသူများသည် တစ်ချိန်ချိန်တွင် ချီးမြှောက်မှုကို ခံရမည်ဟု မလျော့ မတင်း ရေးသားထားခဲ့သည်။
ယခု ဗာတီကန်အတွင်း၌ ဖြစ်လာသော ကွန်ဆာဗေးတစ်များ၏ အတိုက်အခိုက်များကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်က ကာဒီနယ် ဘိုဂေါ့လီယိုကို ရွေးချယ်ခဲ့စဉ်က မည်သူမျှ ကြိုတင် သိမြင်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်။ သို့သော် ကာဒီနယ် ဘိုဂေါ့လီယိုကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသူ အများစုသည် ဗာတီကန်အတွင်းမှ အရိုးစွဲနေသာ ဗျူရိုကရေစီ စနစ်ကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သူအဖြစ် သုံးသပ်ကာ မဲပေးခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ လက်ရှိလည်း ပုပ်ဖရန်စစ်အဖို့ ရန်သူများဝိုင်းလာသော်လည်း မဲပေး ခဲ့ကြသော ကာဒီနယ်တို့၏ မျှော်လင့်ချက်ကို အထိုက်အလျောက် ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ခဲ့သည်ချည်းသာဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လစ်ဗရယ်နှင့် ကွန်ဆာဗေးတစ်တို့အကြား အကွဲအပြားကို ယခုလောက် ပြင်းထန်မည်ဟု မမျှော်လင့်ခဲ့ကြပေ။
ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များအကြား အဓိကကွဲပြားချက်ကို ကြည့်လျှင် ဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးက ကမ္ဘာကြီးအတွက် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ဦးဆောင်သင့်သည်ဟု ခံယူသူများနှင့် ကမ္ဘာကြီးကသာ ဝတ် ကျောင်းတော်ကို စီမံရမည်ဟု ယုံကြည်သူများဟူ၍ နှစ်ဘက် ဖြစ်လာသည်ကို တွေ့ရမည်။ ကက်သ လစ်ဘာသာဝင်များထဲတွင် ထိုသို့သော အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုရှိသည်။ ပမာအားဖြင့် ပုပ်ဖရန်စစ်သည် ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်းသမား ဖြစ်သလို သူ့ရှေ့ပိုင်းက ပုပ်ရဟန်းမင်းများမှာမူ ကမ္ဘာကြီးနှင့် မရောယှက်ဘဲ ဘာသာလဝါ နေတတ်ကြသူများအဖြစ် စရိုက်ချင်းကွဲပြားနေသည်ကို တွေ့ရ သည်။
ဗာတီကန်ထဲမှ တသီးတသန့် ဆန်လိုကြသော သူများကို ကြည့် လိုက်ပြန်လျှင်လည်း အမေရိကန် ပရိုတက်စတင့်မှ ကူးပြောင်းလာ သူများနှင့် ပညာရေးအခြေခံအားနည်းသည့် အသိုက်အဝန်းမှ လာသည်ကများသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုသူတို့သည် အပြောင်းအလဲဆို သည့် အသံကြားလိုက်သည်နှင့် ချက်ချင်း မျက်မှောင်ကျုံ့သွားတတ် သူများ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာတရားများ၏ ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲသည် သက် ဆိုင်ရာ ဘာသာဝင်တို့ ကိုယ်တိုင် အလှည့်အပြောင်းလုပ်ခဲ့ကြသည်ကများသည်။
၁၉၆ဝ ပြည့်လွန်နှစ်များ၏ ကနဦးနှစ်ကာလများတွင် ဝတ်ကျောင်းတော်မှ ဘိရှော့စ်များ စုစည်းကာ ကမ္ဘာနှင့် တသီးတသန့်ဖြစ်နေသော ဗာတီကန်၏ ပြုပြင်ရေးများစတင်ခဲ့သည်။ ခေတ်မီသော အတွေးအခေါ်များနှင့် ဒုတိယဗာတီကန် ကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
သမိုင်း၌ ဗာတီကန် (၂) ဟု အမည် တွင်သည့်ကောင်စီက 'ကမ္ဘာဆီသို့ ပြတင်းတံခါးများ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ' ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ ထိုစကားသည် ပုပ် John XXIII ၏ စကားဖြစ်ပြီး ဗာတီကန်နှင့် လူသားတို့အကြား ပိုင်း ခြားထားသည့် ကန့်သတ်ချက်များကို အထိုက်အလျောက် ဖြေလျော့ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပုပ် John XXIII သည် သူ၏ ရည်မှန်းချက် မပြည့်မီ ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
သို့သော် ဗာတီကန်(၂) ဆက် များအဖြစ် ဂျူးဆန့်ကျင်မှုကို စွန့် လွှတ်ခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့် အရေးကိစ္စများနှင့် ဝတ်ကျောင်းတော် တို့ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ ဗာတီကန်အတွင်း လက်တင်ဘာသာကြီးစိုးမှုကို လျှော့ချခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အခြား ဘာသာဝင်များနှင့်လည်း ဗာတီကန် ၏ နွေးထွေးသော ဆက်ဆံရေးကို စတင်နိုင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ ဗာတီကန်ထဲမှ ပုပ်ဖရန်စစ်၏ အပြောင်းအလဲနှင့် ခံယူကျင့်သုံးလိုသည့် လမ်းစဉ် များသည် ဗာတီကန်(၂) တစ်ကျော့ ပြန်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု တင်စားကြသည်။
ပုပ်ဖရန်စစ်ကို အဓိက တိုက်ခိုက်သူများထဲတွင် ကာဒီနယ်ရော ဘတ်ဆာရနှင့် အမေရိကန်ကာ ဒီနယ် ရေမန်ဘာ့ခ်တို့ နှစ်ဦးမှာထင်ရှားသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်က ဗာတီကန်တွင် ပြုလုပ်သော တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုတွင် ကာဒီနယ်ဆာရက လူတိုင်းကို ကြိုဆိုလက်ခံဖို့ လိုအပ်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ရန်သူဟု မှတ်ယူရမည့်သူများကို လက်သင့်မခံနိုင်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ဆာရက ဘုရား သခင်နှင့် မိစ္ဆာကောင်ကို အတူတွဲ ထားရန် မဖြစ်နိုင်ဟု ဆိုသည်။
သူက ၂ဝ ရာစုတွင် နာဇီဖက်ဆစ်ဝါဒနှင့် ကွန်မြူနစ် ဝါဒများကို ထောက်ပြသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဖြစ်ထွန်းနေသော အနောက်တိုင်းမှ လိင်တူနှစ်သက်သူများ၊ ကိုယ်ဝန်ဖျက် ချခွင့်ပေးသော အိုင်ဒီရိုလော်ဂျီများနှင့် အစ္စလာမ် အစွန်းရောက်ဝါဒများကို လက်ညှိုထိုးခဲ့သည်။ ကာနယ်ဒီနယ်ဆာရကို ရှေးရိုးစွဲသူများ ဘက်က ပုပ်ဖရန်စစ် မရှိတော့သည့်အခါ ဆက်ခံသူ ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြသည်။
ကာဒီနယ် ရေမန်ဘာ့ခ်ကမူ ပုပ်ဖရန်စစ်ကို လူသိရှင်ကြား တိုက် ခိုက်သူဖြစ်သည်။ သူသည် ပုပ်ဖရန် စစ် မရောက်မီက ဗာတီကန်အတွင်း ဝတ်ကျောင်းတော်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကျင့်သုံးစနစ်တိုင်းကို တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ပုပ်ဖရန်စစ် တက်လာသော အချိန်တွင် ဗာတီကန် ငွေတိုက်နှင့် ကျူရီယာ အဖွဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုများအပြင် ရေမန်ဘာ့ခ် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလည်း ယုတ်သိမ်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ရေမန် ဘာ့ခ်သည်လည်း ပုပ်ကိုရန်သူလို သဘောထားလာခဲ့သည်။
ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ အတွင်းက ဗာတီကန်လမ်းများတွင် ကာဒီနယ် ဘာ့ခ်အပေါ် ပုပ်ဖရန်စစ်၏ ကိုင် တွယ်ပုံများအား မကျေနပ်သူများက လမ်းပေါ် ထွက်ခဲ့ကြသည်။ 'ဖရန်စစ်၊ သင့်ရဲ့သနား ကရုဏာဆိုတာ ဘယ် မှာလဲ'ဟု အော်ဟစ်ကာ ကန့်ကွက်ခဲ့ သည်။
ဗာတီကန် (၂) အပြီး နှစ်ပေါင်း ၆ဝကျော်တွင် ဖြစ်လာသည့် အလှည့် အပြောင်းများ ဖြစ်သည်။ လူသား ချင်းစာနာမှုကို အထူးအလေးပေး လေ့ရှိသော ပုပ်ဖရန်စစ်။ ဘာသာခြားတို့၏ ခြေကို ဆေးသော ပုပ်ဖရန် စစ်။ လိင်တူချစ်ကို အပြစ်မမြင်သော ပုပ်ဖရန်စစ်။ ဝတ်ကျောင်းတော်အတွင် အပြောင်းအလဲများစွာကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနေသော ပုပ်ဖရန်စစ် ဖြစ်သည်။
ပုပ်ဖရန်စစ်၏ အပြောင်းအလဲများကို ဝတ်ကျောင်းတော်က အပြည့်အဝ လက်ခံနိုင်မလားဟူ သော မေးခွန်းထုတ်လျှင် အနည်းငယ် ပြောင်းလဲနေသည်ဟုသာ ဆိုရမည်။ အချိန်က စကားပြော လာလိမ့်မည် လားဟု မေးလျှင်မူ ဖြေရခက်လှ သည်။ အကြောင်းမှာ အချိန်ကာလကြောင့် ပုပ်ဖရန်စစ်၏ အလိုများ ပြည့်ဝသွားမည်ဟု မဆိုနိုင်သော ကြောင့်ပင်။ ယခုပင်လျှင် အသက် ၈ဝရှိကာ အဆုတ်တစ်ခြမ်းနှင့်သာ အသက်ဆက်နေရသော ပုပ်ဖရန်စစ် ကိုယ်တိုင်က သူ၏ သက်တမ်းသည် ခပ်တိုတိုသာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဗာတီကန်အတွင်းက ရန်သူများအကြားတွင် ရှိနေသော ပုပ်ဖရန်စစ်ကို နှစ်သက်သူများက ဝတ်ကျောင်းတော် ပြင်ပတွင် ပိုမိုများပြားစွာရှိနေသည်။ ရန်သူတို့၏ ပုပ်ဖရန်စစ် ထွက်ခွာချိန်ကို မျှော်လင့်နေချိန်တွင် ပုပ်ဖရန်စစ်သည် သာသနာပြုခရီးများကို ယခင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးများထက် ခပ်စိပ်စိပ် ချီတက်ရင်းက လှည့်လည် နေတော့သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်မှ ၃ဝ ရက်နေ့အထိ မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်လည်ပတ်မည့် ပုပ်ရဟန်း မင်းကြီး ဖရန်စစ်၏ ခရီးစဉ်အတွက် တရားဝင် လိုဂိုတံဆိပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုတံဆိပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အလံတော်မှအနီ၊ အစိမ်း၊ အဝါ ရောင်လိုင်းများဖြင့် အသည်းနှလုံးပုံကို ရေးဆွဲထားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး လက္ခဏာအဖြစ် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ချိုးငှက်လွှတ်ပေးနေသည့် ပုံလေးကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ထိုပုံဘေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံပါရှိပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့်မေတ္တာဟူသော စာတမ်းကို အ သည်းနှလုံးပုံပေါ်တွင် ရေးထိုးထားသည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီ၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာတွင် ' . ..ချစ်ခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းခြင်း သတင်းကောင်းကို ဟောကြားမည့် သူ၏ (ပုပ်ဖရန်စစ်၏) နှုတ်လျှာကို နှုတ်တော်ထွက် တရားဆီမီးများဖြင့် အလင်းပေးတော်မူပါ။ ... အမိမြန်မာပြည်ကို ငြိမ်းချမ်းသာယာ စည်းလုံးညီညာသည့် ဘက်စုံဖြိုးတိုး တတ်သော နိုင်ငံအဖြစ် ကောင်းချီး ပေးတော် မူပါမည့် အကြောင်း ...' များ ရေးသားထားကြောင်း ဖတ်ရှု ရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘာသာဝင်အသီးသီးအဖို့မူ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လာရောက်သည့် ခရီးစဉ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ တိုင်းရင်းသားများအပါအဝင် နိုင်ငံသားအများစုက မနှစ်သက်သည့် စကားလုံးတစ်လုံးကို သတိလက်လွတ် ပြောမိလိုက်မည်ကို အထူးစိုးရိမ် လျက်ရှိကြသည်။ ထို့အတွက် ပုပ် ရဟန်းမင်းကြီး၏ ဆုတောင်း မေတ္တာအတိုင်း 'သူ၏နှုတ်လျှာကို နှုတ်ထွက်တော် တရားဆီမီးများဖြင့် အ လင်းပေးတော် မူပါစေကြောင်း' တူညီသော ဆုမွန်ကောင်းကို တောင်း လိုက်ရပါတော့သည်။
(1) The War against Pope Francis By Andrew Brown
(2) Pope Francis Excommunicates Priest Who Backed Women’s Ordination and Gays
(3) ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ် - The Key Collection